စီးပွားရေးအင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရများ (Marketing) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on June 18, 2013 at 12:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ၊ ဝေါဟာရတွေဟာသာမန်နေ့စဉ်ဘ၀ထဲမှာပြောဆိုတာထက် နည်းနည်းတော့ထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကိုသင်ယူနေသူများနဲ့ ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက်အရေးကြီးသည့် သိထားသိသည့်စကားလုံးများဖြစ်ပါသည်။ ဒီသင်ခန်းစာဟာ အလယ်အလတ်အဆင့်လေ့လာပြီးသား သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
1. marketing (ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်း)
The action or business of promoting products or services to the public or other businesses.
e.g. Marketing plays an important part in the success ofanew product.
The internet has allowed companies to target their marketing more precisely.
ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုများအားစားသုံးသူများထံသို့သော်လည်းကောင်း၊ တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထံသို့သော်လည်းကောင်း သိသာစေရန်ကြော်ငြာခြင်း။
Wikipedia မှာတော့ marketing ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၊ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို စားသုံးသူများသိအောင် ဆက်သွယ်မှုပြုတဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်လို့ဆိုပါတယ်။ marketing ဟာရောင်းတာဆိုပေမယ့် ရောင်းချခြင်းသက်သက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားလုပ်ငန်းစဉ်များစွာ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါသေးတယ်။ အမေရိကန်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအသင်းကြီးက ဒီလိုဆိုပါတယ်။
marketing colocate strongly with other words.
Direct + Marketing
Targeted + Marketing
Viral + Marketing
2. Advertising (ကြော်ငြာခြင်း)
The action or business of the promotion through public announcements in newspapers, TV, radio or the Internet ofaproduct, service or event in order to attract or increase interest in it.
e.g My company now spends more on advertising on the web than we do on TV.
GE has increased its advertising budget by 10% to help it grow in new markets.
သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို၊ အင်တာနက်တို့မှတဆင့် ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှု၊ ပွဲလမ်းသဘင် တစ်ခုခုကို အများသိသာစေရန်၊ စိတ်ဝင်စားလာစေရန်ဆွဲဆောင်ဆောင်ခြင်း။
3. Brand အမှတ်တံဆိပ်
A type of product made byaparticular company. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထပ်တူကျတတ်သည်လည်းရှိသည်။ ဥပမာ cocoa cola,
e.g What brand of soap do you usually buy?
The Coca-Cola brand is worth more than 55 Billion dollars.
4. Launch ပွဲထုတ်သည်။
To introduceanew product, with advertising and publicity. ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုဈေးကွက်တွင်စတင်ရောင်းသည်။
e.g We plan to launch the new product next month.
Ford plans to launch3new small car models this year to try to recapture market share.
5. Consumer စားသုံးသူ
A person who buys goods or services. ကုန်စည်ဖြစ်စေ၊ ၀န်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေအခကြေး ငွေပေးကာသုံးစွဲသူ
e.g The rise in transport cost will mean higher prices for the consumer.
Consumer advertising is onlyasmall part of our marketing mix because we are mainly focused on corporate clients.
6. Market research ဈေးကွက်သုတေသန
The collecting and processing of information about customers- how they feel aboutaproduct and why they will or will not useaproduct or service. စားသုံးသူတွေ၊ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားသည်။ ဘာကြောင့်သုံးစွဲသည်။ ဘာကြောင့်မသုံးစွဲ စသည့်အချက်အလက်များစုစောင်းလေ့လာမှုပြုသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းမပြုမီ ၀ယ်ယူရန်အလားအလာရှိသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အလေ့အထများ၊ ၀င်ငွေအခြေအနေစသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည့် တခြားကုန်ပစ္စည်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုသိနိုင်ရန်ပြုလုပ်သော လေ့လာမှု။
e.g Market research shows that there is demand for another large supermarket in the area.
7. Brand Idendity ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်
Howacompany wants the consumer to see its product. The company may want the customer to see the product asaluxury item or perhapsacheaper item.
ကုမ္ပဏီက မိမိထုတ်ကုန်အပေါ် စားသုံးသူတွေတန်ဖိုးထားမှုအမြင်ဘယ်သို့ရှိစေချင်သည် ကိုပြဌာန်းချက်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းအနေနှင့်လား။ ဈေးပေါသည့်ပစ္စည်းအနေနှင့်လား။
e.g Gucci hasastrong brand identity in the luxury market.
The new advertising campaign is intended to improve our brand identity.
8. Public relations (PR) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး
Creating and maintainingagood image with your customers and the public.
e.g After the recent scandal, the company has startedanew PR campaign to help improve public relations.
Angela works in PR. She's the Public Relations officer foraGerman bank.
9. Campaign စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း
A planned and organized series of actions intended to promoteaproduct or service.
e.g Our company will launchanew campaign to market our products to European consumers.
Accenture, will launchanew marketing campaign to promote its services to small companies.
10. Position ဈေးကွက်တွင်းနေရာယူခြင်း
To affect the wayaproduct is presented to the public and the how people think about that product.
ကုန်ပစ္စည်း၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပုံရိပ် အား မိမိရည်ရွယ်သည့်ဈေးကွက် နှင့်စားသုံးသူအကြားတည်ထောင်ခြင်း၊ နေရာယူခြင်း။
e.g We need to position the new product carefully or we will miss our target market.
Toyota is positioning its products to middle-income families in Asia.
စီးပှားရေးနဲ့ပတသြကတြဲ့အသုံးအနှုနြးတှေ၊ ဝေါဟာရတှဟောသာမနနြစေ့ဉဘြဝထဲမှာပှောဆိုတာထကြ နညြးနညြးတော့ထူးခှားနတတေပြါတယြ။ စီးပှားရေးဘာသာရပမြွားကိုသငယြူနသေူမွားနဲ့ ကုမျပဏီမွားတှငလြုပကြိုငနြသေူမွားအတှကအြရေးကှီးသညြ့ သိထားသိသညြ့စကားလုံးမွားဖှစပြါသညြ။ ဒီသငခြနြးစာဟာ အလယအြလတအြဆငြ့လလေ့ာပှီးသား သူမွားအတှကရြညရြှယပြါတယြ။
1. marketing (စွေးကှကဖြောဆြောငခြှငြး)
ကုနပြဈစညြး၊ ဝနဆြောငမြှုမွားအားစားသုံးသူမွားထံသို့သောလြညြးကောငြး၊ တခှားစီးပှားရေးလုပငြနြးမွား ထံသို့သောလြညြးကောငြး သိသာစရနေကြှောငြှာခှငြး။
Wikipedia မှာတော့ marketing ဆိုတာ ကုနပြဈစညြးတစခြု၊ ဝနဆြောငမြှုတစခြုရဲ့တနဖြိုးကို စားသုံးသူမွားသိအောငြ ဆကသြှယမြှုပှုတဲ့လုပငြနြးအဆငြ့ဆငြ့လို့ဆိုပါတယြ။ marketing ဟာရောငြးတာဆိုပမယြေ့ ရောငြးခခွှငြးသကသြကလြညြးမဟုတပြါဘူး။ တခှားလုပငြနြးစဉမြွားစှာ ပါဝငပြတသြကနြပေါသေးတယြ။ အမရေိကနအြရောငြးမှငြ့တငရြေးအသငြးကှီးက ဒီလိုဆိုပါတယြ။
2. Advertising (ကှောငြှာခှငြး)
သတငြးစာ၊ ရုပမြှငသြံကှား၊ ရဒေီယို၊ အငတြာနကတြို့မှတဆငြ့ ကုနပြဈစညြး၊ ဝနဆြောငမြှု၊ ပှဲလမြးသဘငြ တစခြုခုကို အမွားသိသာစရနြေ၊ စိတဝြငစြားလာစရနေဆြှဲဆောငဆြောငခြှငြး။
3. Brand အမှတတြံဆိပြ
A type of product made byaparticular company. ကုနအြမှတတြံဆိပြ။ တစခြါတစရြံ ကုမျပဏီနှငြ့ ကုနအြမှတတြံဆိပထြပတြူကတွတသြညလြညြးရှိသညြ။ ဥပမာ cocoa cola,
4. Launch ပှဲထုတသြညြ။
To introduceanew product, with advertising and publicity. ကုနပြဈစညြးအသစတြစခြုကိုစွေးကှကတြှငစြတငရြောငြးသညြ။
5. Consumer စားသုံးသူ
A person who buys goods or services. ကုနစြညဖြှစစြေ၊ ဝနဆြောငမြှုကိုဖှစစြအခေကှေး ငှပေေးကာသုံးစှဲသူ
6. Market research စွေးကှကသြုတသနေ
The collecting and processing of information about customers- how they feel aboutaproduct and why they will or will not useaproduct or service. စားသုံးသူတှေ၊ ဖောကသြညတြှရေဲ့ ကုနပြဈစညြးတစခြုအပြေါ ဘယလြိုသဘောထားသညြ။ ဘာကှောငြ့သုံးစှဲသညြ။ ဘာကှောငြ့မသုံးစှဲ စသညြ့အခကွအြလကမြွားစုစောငြးလလေ့ာမှုပှုသညြ။ ကုနပြဈစညြးအသစတြစခြုကို ထုတလြုပရြောငြးခခွှငြးမပှုမီ ဝယယြူရနအြလားအလာရှိသူမွား၏ လိုအပခြကွမြွား၊ အလအေ့ထမွား၊ ဝငငြှအခှေအနေစသေညတြို့ကိုလညြးကောငြး၊ စွေးကှကတြှငရြောငြးခနွပှေီဖှစသြညြ့ တခှားကုနပြဈစညြးမွား၏အောငမြှငမြှုကိုသိနိုငရြနပြှုလုပသြော လလေ့ာမှု။
7. Brand Idendity ကုနအြမှတတြံဆိပပြုံရိပြ
ကုမျပဏီက မိမိထုတကြုနအြပြေါ စားသုံးသူတှတနေဖြိုးထားမှုအမှငဘြယသြို့ရှိစခငွေသြညြ ကိုပှဌာနြးခကြွ။ ဇိမခြံပဈစညြးအနနှငြေ့လား။ စွေးပေါသညြ့ပဈစညြးအနနှငြေ့လား။
8. Public relations (PR) ပှညသြူ့ဆကဆြံရေး
9. Campaign စညြးရုံးလှုံ့ဆောခြှငြး
10. Position စွေးကှကတြှငြးနရောယူခှငြး
ကုနပြဈစညြး၊ အမှတတြံဆိပြ၊ အဖှဲ့အစညြးတစခြု၏ပုံရိပြ အား မိမိရညရြှယသြညြ့စွေးကှကြ နှငြ့စားသုံးသူအကှားတညထြောငခြှငြး၊ နရောယူခှငြး။
Permalink Reply by eieikhin on June 20, 2013 at 13:47
I want to know microfinance vocabuloru .can u tell me?
Permalink Reply by Ratan Biswas on June 26, 2013 at 13:22
Permalink Reply by Mar Mar Cho on June 26, 2013 at 21:57
Permalink Reply by lwin lwin aung on June 29, 2013 at 23:09
Permalink Reply by winhtutzaw on October 17, 2013 at 11:25
If you have the free time help me post the management project plan how to made it.I want to know about that please reply me.